Como Park Zoo & Conservatory way furantahay - laakiin waxay ubaahantahay boos celin hore - (Somali) - Como Zoo Conservatory
Muhiim: Fadlan dib u eeg dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee hoose ka hor intaadan booqan!
* Boos celis ayaa shaqeynaya illaa iyo afar qof. Ku dar dhallaanka iyo carruurta meelayntaada.
* Kuraas-curyaameedka, kuraasta curyaamiinta, iyo ilaha cabitaanka lama heli karo waqtigan. Waad soo kaxaysan kartaa kursi cuuryaameedkaaga ah, koronto wax lagu riixo ama dhalada biyaha ka buuxaan hadba sida loogu baahdo.
* Booskaaga waxaa ka mid ah socod hal-hag ah oo loo maro Como Zoo iyo Marjorie McNeely Conservatory, oo ay ku jiraan Hadiyado kala ah Pier 56 Café iyo Hadiyado Garden Safari. Kuma jiraan Como Town. Ma jiri doonto marin u socodka Zoo-ga Como Town.
* Fadlan ku daabac ama booskaaga meelaad taleefankaaga ha lagu soo jiito. Galitaanka waxaa la siin doonaa kala-badh saacad badhkeed. Tusaale ahaan, Boos celinta 11:00 AM ayaa la soo dhaweynayaa laga bilaabo 11:00 AM – 11:30 AM. Si loo ilaaliyo fogeynta bulshada iyo in laga fogaado in la sugo, fadlan hore ha u soo gelin. Hadaad goor hore timaadid, qorshee inaad ku raaxaysato jardiinooyinka iyo dariiqyada ku yaal Como Park weyn.
* Gelitaanku waa bilaash laakiin waa inaad tikidhadaaga waqtigooda ku gaadhaan khadka tooska ah. Waxaan weydiisannaa tabaruc tabaruc ah oo ah $ 4 dadka waaweyn iyo $ 2 oo loogu talagalay carruurta albaabka hore, kaasoo ah lacag caddaan ah oo keliya xilligan.
* Roob furan ama iftiin! Booqashadaada badankood waa banaanka.
* Xannaanada Xayawaanka iyo Isku-dhafka ayaa dhow 4-ta galabnimo. Dhammaan martida waxaa la weydiisan doonaa inay baxaan waqtigaan.
Amniga shaqaalahayaga, xayawaannada, iyo martida waxaan uga baahan nahay dadka oo dhan inay xidhaan wejiga / waji-xidhka marka ay ku sugan yihiin aagga Como Park Zoo iyo Conservatory. Tani waxay qusaysaa dhammaan shakhsiyaadka aan ka ahayn carruurta yar yar ee halista u ah in ay dhintaan iyo dadka aan caafimaad ahaan u dulqaadan karin xirashada wejiga. Fadlan ku xafido waji-xidhkaaga (daboosho afka iyo sanka) muddada booqashadaada.
Boos celinta Horay Loo Baahan Yahay: www.comozooconservatory.org
Fadlan kaalay maalin kale haddii adiga ama xubin ka tirsan xisbigaaga aad hadda la kulantaan wax astaamo ah COVID-19 oo aan u sababayn xaalad kale? Calaamadahaas waxaa ka mid ah qufac, neefta oo ku qabata, qandho, dhaxan, murqo xanuun, madax xanuun, cuno xanuun, dhadhan ama miro cusub?
Previous Post: « KOmOBPFsFPOkoIPOtIkWIkoLloI doR tImuItIbOtIkWIkoloI tPFxO:ToF – bFsFdoRtIreFkLeBmBlOfsOlOFbFwe. (Karen)
Next Post: A Drone’s Eye View of Como Harbor! »